တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား(Southerns And Northerns)(ဆောင်းပါး) | https://khaingkyawsanmusics.wordpress.com
← သင်္ကြန်ရီ အီးပါစီ(ဘုန်းမင်းဇံ)
ရခိုင့်အမွေအနှစ်တွေကို မယူကြပါနဲ့တော့(ဆောင်းပါး) →
တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား(Southerns And Northerns)(ဆောင်းပါး)
တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါရေ။မာန်ပါကတ်ကေလေ့ မတတ်နိုင်။ရခိုင်ပြည်မှာ အဂုလောလောဆယ်အခြေအနိန်တောင်မှ တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား ခွဲခြားစိတ် ဟိန့်နိန်ကတ်တုန်းပင်ဖြစ်ပါရေ။အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ကေ ဘာသာစကားကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါရေ။မြောက်ပိုင်းသားလို့ ပြောကတ်တေ စစ်တွေ၊ပုဏ္ဏန်းကျွန်း၊ကျောက်တော်၊မြောက်ဦး၊မြင်းပြား၊ပေါက်တော၊ဘူးသီးတောင်
၊မောင်တော၊ရင်္သေ့တာင်၊မြီပုံ၊ မြို့နယ်အစဟိန့်ရ မြို.တိကို ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းလို့လက်ရှိ ရခိုင်ဒေသမှာ ခေါ်နိန်ကတ်ပါရေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရေ ပြည်နယ်အဆင့်မှာ မဟုတ်ခပါ။လွန်ခရေ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်လောက်ကပင် ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားခရေ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် တည်ဟိန့်ပီး ဖြစ်ပါရေ။ ဗမာနယ်ချဲံတိ အုပ်ချုပ်ခရေ အချိန်ခါက သူရို.အုပ်ချုပ်မှု လွေကူအောင် သွီးခွဲပနာ အုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် သွီခွဲလားပနာ တောင်ပိုင်း၊မြောက်ပိုင်းလို့ ခွဲခြားလာကတ်စော်တိကို တွိရပါရေ။ရခိုင်ပြည် ၁၈မြို.နယ်ဟိန့်စော်မှာ တောင်ပိုင်းသားလို့ ပြောကတ်တေ ကျောက်ဖြူ၊ရမ်းဗြဲ၊
မာန်အောင်၊တောင်ကုတ်၊အမ်း၊သံတွဲ၊ဂွ၊မအီ ဒေချင့်တိထဲမှာ ကျောက်ဖြူ၊ရမ်းဗြဲ၊
မာန်အောင် တောင်ကုတ်၊ မအီ၊ရခိုင်စကားကို ပြောကတ်ပါရေ။စကားနည်းနည်း ကွဲကေလေ့ စကေသျှေလောက်ရာ ဖြစ်ပါရေ။ဒေသစကားရာ ဖြစ်ပါရေ။ဗမာစကားကိုတော့ မပြောကတ်။တစ်ချို.တစ်လီတော့ ပြောကတ်ပါရေ။ယေကေလေ့ ရခိုင်စကားကို နားလည်ရေ။သံတွဲ၊ဂွ၊ဘက်က လူတိကျခါ ဗမာစကားကို အများအားဖြင့် ပြောကတ်စော်တိကို တွိ.ရပါရေ။
အဆိုးဆုးံက ရခိုင်စကားပြောခြင်းကို ပင် နားမလည်ခြင်းပင် ဖြစ်တေ။ယင်းအတွက်နန့်ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ကျင်းပရေဖြစ်စီ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပရခါ ဖြစ်စီ ဆွီးနွီးပွဲတစ်ခု လုပ်ကတ်တေခါဖြစ်စီ အများသူငါ နားလည်ဖို. ဗမာစကားကို ပြောရပါရေ၊ချချင်းသျှေ ပြောရဖို့ဆိုကေ ရခိုင်လူမျိုးတိ အားလုးံဖြစ်တေ ရခိုင်စစ်စစ်တိက သံတွဲ၊ဂွက လူတိ နားလည်ဖို့ ဗမာစကားကို ငှားပနာ ပြောရခြင်း သုးံရခြင်း ဖြစ်နိန်ပါရေ။ကကောင်း ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပါရေ။ဇာအတွက် ရခိုင်အချင်းချင်း ဗမာစကားကို ပြောနိန်ရပါဖို့လဲ။ကိုယ်ပိုင်စာပီ ကိုယ်ပိုင်စကား ဟိန့်နိန်ယင်းသားနန့်ပင် ဗမာစကားကို ပြောနိန်ရဖို့လားလို့ စောဒက တက်စရာတိ ဖြစ်လာပါရေ။
မျိုးချိုက်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမှာလည်း ရခိုင်စကားကို ပြောကတ်တေ နားလည်ကတ်တေ အထက်က မြို.နယ်က လူတိလောက် မပြင်းထန်ကတ်၊တက်ကြွမှု မဟိန့်ကတ်စော်တိကို တွိ့ရပါရေ။ဘာသာစကားကြောင့် တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း ပြသာနာ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါရေ။ဆိုလိုချင်စော်က ဗမာစကားကို ပြောကတ်တေ သံတွဲ၊ဂွ ဘက်ကလူတိက ရခိုင်စကားကို ပြောတတ်တေ နားလည်ကတ်တေ လူတိထက် ပိုလို့ မျိုးချိုက်စိတ် ပြင်းထန်ပနာ ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတိမှာလည်း တတက်ကြွကြွ ပါဝင်သင့်ပါရေ။ငါရို.လည်း ရခိုင်လူမျိုးရာ ရခိုင်သွီးရာ ဖြစ်တေ ဆိုရေ အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရခိုင်စကားကို ပြောတတ်တေ နားလည်ကတ်တေ လူတိထက် ပိုလို့ ရခိုင်အရေးကို လှုပ်သျှားသင့်ပါရေ။ယေမှ တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား ဆိုရေ အသိစိတ်ဓာတ်တိ ပျောက်ကွယ်ပနာ အားလုးံရခိုင်လူမျိုးတိရာ ဖြစ်တေ ဇာသူခွဲခွဲ ငါရို.မခွဲဆိုရေ အသိစိတ်ဓာတ်တိ ၀င်လာဖို့ပင်ဖြစ်ပါရေ။တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုရေပိုင် ရခိုင်စကားကိုလည်း နားလည်ပနာ ပြောတတ်လာဖို့ ရီးတတ်လာဖို့ အချင်းချင်း ချစ်ကြည် လာကတ်ဖို့ပင်ဖြစ်ပါရေ။
အနာဂတ် ရခိုင်တိ အတွက် နောက်အခါ တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား ခွဲခြားစိတ်လည်း ပျောက်ဆုးံလားဖို့ပင်ဖြစ်တေ။စည်းလုးံမှုက အောင်ပွဲဆိုရေပိုင် တနိန့်မ၀ီးရေ အချိန်မှာ ဖရခိုင်ပြည်လည်း ရခိုင်လက်ထဲသို့ မုချဧကန် ရောက်လာဖို့ပင်ဖြစ်ပါရေ။ဗမာစကားကိုလည်း ငှားသုးံစရာ ပြောနိန်စရာလည်း လိုအပ်လီဖို့လည်း မဟုတ်ပါဗျာယ်။ရခိုင်အဖွဲ့အစည်း ဟောပြောပွဲတိ လုပ်တေအခါမှာလည်း ရခိုင်စကားနန့်ရာ ပြောလားလီကတ်ပါဖို့လို့မြင်ပါရေ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တရားဟောပြောပွဲတိလုပ်တေအခါပင် ဖြစ်စီ၊ဗွီဒီယို ဆိုင်းဘုတ်ရွှီးရေအခါပင်ဖြစ်စီ၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ၊ထမင်းဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင် တိမှာ တင်ရေဆိုင်းဘုတ်တိစော်လည်း ရခိုင်ဘာသာစကားနန့်ရာ ရွှီးပနာ MENU(စားသောက်ဖွယ်ရာ စာရင်းတိမှာလည်း)ရခိုင်စာနန့်ရာ ဖြစ်လားပါဖို့ထင်မြင်ပါရေ။
ရခိုင်စကားကို ပြောကတ်တေ နားလည်ကတ်တေ လူတိကလည်း မိခင်ဘာသာစကားကို တန်ဖိုးထားလို့မိမိပိုင်ဆိုင်ရာ ဆိုင်တိ နိန်ရာတိမှာ ရခိုင်စကားနန့်ပင် ရွှီးထားသင့် ဆိုင်းဘုတ်ထောင်သင့်ပါရေ။အေမှ မျိုးဆက်သစ်ရခိုင်တိအတွက် အားဆီးတစ်ခွက် ဖြစ်တေပိုင် မျက်စိပွင့်နားပွင့် ဖြစ်လားလီကတ်ပါဖို့လိုံထင်ပါရေ။ရခိုင်စကားနန်. ရွှီးထားလို. လူအများနားမလည်ဖို့စွာ ကြောက်ကေဆိုပါကေ ဘေးက အင်္ဂလိပ်စာနန့်ထပ်ရီးထားလို့ရဘာရေလိုံ အကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါရေ။(ရွှီမြောက်ဦး-ခိုင်ကျော်ဆန်း)
I would like to say something.Though You are angry with me,just complain me. There are still differentiating southerns And Northerners at the present in Rakhaing State Sofar.Our Country Isn’t State .It Was Great Country Since 3000Years Over In the World.It became the result of Language.SiteTway/Pon Nar Kywan/Kyauk Taw/Mraukoo/Min Byra/Pauk taw/Buthidaung/Maungdaw.Rathitdaw/Myay bon/ is called that North of RaKhaing Currently too.Since Burmese invader created to be easy for rule within National Rakhine People.Among 18 township of RaKhaing, Kyauk phyu/RanBray/ Mhan Aung/ Taung Gote/Anm/Than Dway/Gwa /Ma Ei called Southern Peoples ,KyaukPhyu/RanBray/Mhan Aung/Taung Gote/ Ma Ei Township people are speaking Our Mother Language.
Although It isalittle different,It are their Regional language(Regional Usage). They don’t speak burmese Language.But Just Some of People Speak Burmese Language.Whatever They can unserstand Rakhinese Launguage.So No Need to Change to Speak Burmese Language.The People From ThanTway,Gwa is speaking Burmese language.The Worst is,They Can’t Understand Rakhinese Language.That’s why,To held For National Rakhine Organization,Also For Festival And For Discussion Have to be Speaking Burmese language to Understand For All of Peoples From Rakhine state.Frankly,All of Pure Rakhine is still speaking Burmese language.It is so shamful.They aren’t passionate in Patriotism Like peoples Who can speak Rakhinese Language well.Why is lending and Using Burmese Language?
We have Own Language and Own Literature.So, The Peoples Who Can’t Speak Rakhinese Language Should Participate in Rakhinese Organization Hand to Hand Strongly and Stay with Familiarly.Only That ,We can Build The Identical Spirit Otherwise Anybody Can’t Divide Within Our Race.Northers And Sourthers’s miss assumption will be Lost in their spirit at the future.Oneday,We will get Our Fatherland to Rule.It is Exactly.Aslo The Peoples who Can Speak Rakhinese Language Should Write With Our own language for Slogans in their Own Shop (Or) their Places.
We Should describe Our own Literature.If So, Every Generation can know about own Language And own Literature Howmuch improved since before Moreover Culture too.If you are afraid to can’t understand by another Races,You can write International Language (English) Beside those Slogan or Motto.
By regard:(Golden mraukoo).
One Response to တောင်ပိုင်းသား မြောက်ပိုင်းသား(Southerns And Northerns)(ဆောင်းပါး)
ကောင်းပါရေ အမျိုးသားရီးဆောင်းပါးတိ များ၂ ရွီးပီးပါ